विश्वभर लोकप्रिय बिबिए
२०७६ भदौ २ सोमबार १६:२१:००
व्यवस्थापन समूहमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि स्नातक तहमा व्यवस्थापन संकायअन्तर्गतको शैक्षिक कार्यक्रम ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्टे«सन (बिबिए) गतिलो विकल्प बनेको छ । दुई दशकअघि नेपालमा सुरु भएको बिबिए कार्यक्रमको अहिले पनि उत्तिकै आकर्षण छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका पूर्वविभागीय प्रमुख प्रा.डा. भोजराज अर्यालले सीमित विद्यार्थी राखेर पढाइने र नतिजासमेत राम्रो भएकाले यो कोर्स संसारभर लोकप्रिय रहेको बताए । नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थामा समेत यो कार्यक्रममा विद्यार्थीको आकर्षण रहेको उनले बताए ।
संख्याका आधारमा स्नातक तहको व्यवस्थापन शिक्षा बिबिएसमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । बिबिएसका विद्यार्थीसमेत कमजोर नभए पनि एउटा तह उत्तीर्ण गरिसक्दा बिबिए र बिबिएसका विद्यार्थीमा फरकपन पाउने गरेको उनले बताए । ‘बिबिएस मास एजुकेसन हो, धेरैले भर्नाको अवसर पाउँछन्, बिबिएमा सेलेक्टेड र सीमित राखेर पढाइन्छ,’ प्रा.डा. अर्याल भन्छन्, ‘सीमित विद्यार्थीमा प्रयोगात्मक अभ्यास बढी हुने, फिल्डमा जाने र शिक्षकले समेत ध्यान दिन सक्ने भएकाले बिबिएसबाट आएको भन्दा कम्युनिकेसनमा फरक क्षमता पाइन्छ ।’
वित्तीय संस्थामा काम गर्नका लागि व्यावहारिक ज्ञान र सीप आवश्यक पर्ने भएकाले बिबिए विश्वभर नै आकर्षक बनेको छ । नेपालमा वित्तीय संस्था बढ्दै गएको र त्यसको सफलतासँग बिबिएका जनशक्तिको योगदान छ । बिबिएले काम गर्ने क्षेत्रहरू व्यावहारिक, व्यवस्थापकीय, सञ्चार, सीप र निर्णय क्षमताको विकास गराउँछ ।
नेपालमा समेत बिबिए कार्यक्रम लोकप्रिय बनेका कारण बिबिए अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्था र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । नेपाली विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त कलेजले मात्र विद्यार्थी र बजारको माग धान्न नसकेका कारण विदेशी विश्वविद्यालययको सम्बन्धनमा समेत नेपालमा बिबिए कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।
व्यवस्थापन संकायको पढाइ हुने नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयले बिबिए कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । काठमाडौं, त्रिभुवन, पोखरा, पूर्वाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले बिबिए कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । सबैभन्दा बढी पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका छन् ।
नेपालमा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार पार्न विश्वविद्यालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । तैपनि बिबिएको विश्वसनीयतामा कमी आएको छैन । बिबिए कोर्स रोजगारमूलक र व्यावसायिक भएकाले निरन्तर लोकप्रिय भएको विज्ञको भनाइ छ । यो कोर्सले बजारमा आवश्यकताअनुसारका प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने हुनाले जनशक्ति खपतमा समेत समस्या छैन ।
बिबिए अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको मूल्यांकनमा समेत व्यावहारिकता रहेको विज्ञको भनाइ छ । यसमा विद्यार्थीको उपलब्धि मूल्यांकन पद्धति पनि व्यावहारिक छ । आन्तरिक रूपमा ४० प्रतिशत र विश्वविद्यालय वा बोर्डबाट ६० प्रतिशतमा मूल्यांकन हुन्छ । सेमेस्टर प्रणालीमा पढाइ हुने, विद्यार्थीको सही मूल्यांकन र राम्रो नतिजासमेत उत्साहजनक छ । कलेजहरूले सीमित विद्यार्थी कोटा निर्धारण गरी प्रभावकारी रूपमा अध्ययन, अध्यापन गराउने र मूल्यांकनका लागि समेत सहजता हुने विज्ञको भनाइ छ । यस कारण पनि बिबिएले बजारका लागि भरपर्दा र प्रभावकारी व्यवस्थापकीय क्षमता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरेको छ ।
वित्तीय संस्थामा काम गर्नका लागि व्यावहारिक ज्ञान र सीप दिने भएकाले बिबिए विश्वभर नै आकर्षक बनेको छ । नेपालमा वित्तीय संस्था बढ्दै गएका छन्, त्यसको सफलतामा बिबिएका जनशक्तिको योगदान छ ।
सरकारीदेखि निजीसम्म आकर्षण
व्यावहारिक शिक्षा दिने सरकारीदेखि निजी कलेजमा विद्यार्थीको निरन्तर आकर्षण छ । त्रिविका आंगिक क्याम्पस शंकरदेव र नेपाल कमर्स क्याम्पसमा विद्यार्थीको आकर्षण बढी छ । न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुने भएकाले पनि आकर्षण भएको शिक्षकको भनाइ छ ।
त्रिविलगायत विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप छ । बिबिएमा ९६ जनाको सिट रहेको त्रिविको आंगिक क्याम्पस शंकरदेवमा २८ सयजतिले आवेदन फारम भर्ने गरेको क्याम्पस प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । शंकरदेवको बिबिए गुणस्तरीय भएकाले पनि आकर्षण धेरै रहेको उनले बताए । शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने गरेकाले बढी चाप हुने गरेको बताए । सबै आंगिक क्याम्पसमा उत्तिकै आकर्षण भने छैन । शंकरदेवबाहेक त्रिविको आंगिक, नेपाल कमर्स क्याम्पसलगायतमा पनि विद्यार्थीको चाप बढी छ ।
बिबिए अध्ययन गरेका विद्यार्थीले रोजगारीमा जाँदासमेत अल्मलिनुपर्दैन । इन्टर्नसिप र प्रयोगात्मक धेरै हुने भएकाले पनि काममा जाँदा अल्मलिनुपर्ने अवस्था नरहेको शंकरदेव क्याम्पस प्रमुख आचार्यले बताए । पहिलो सेमेस्टरदेखि अन्तिम सेमेस्टरसम्म गर्ने अभ्यास, प्रेजेन्टेसनलगाय कारण उनीहरूमा ‘कन्फिडेन्स’ लेभल बढ्ने उनको भनाइ छ । फिल्ड रिपोर्ट, इन्टर्नलगायतले पनि बिबिए विद्यार्थीको नतिजा र पर्फर्मेन्स राम्रो भएको उनले बताए ।
उनीहरूले अध्ययनकै क्रममा व्यावहारिक ज्ञान पाउने भएकाले पनि इन्टर्नसिपको समेत व्यवस्था भएकाले कतिपयले त्यतिवेलादेखि नै रोजगारी पाउने गरेका छन् । बिबिए उत्तीर्ण जनशक्तिले देशभित्र र विदेशमा समेत रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन् । कतिपय विद्यार्थीले अध्ययन सकेपछि विदेशमा ठूला कर्पाेरेट संस्थामा रोजगारी पाएका छन् ।
यसरी भित्रिएको थियो बिबिए
दुई दशकअघि सन् १९९७ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपालमा पहिलोपटक बिबिए कार्यक्रम भिœयाएको थियो । अहिले त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिबिए सुरु गरेपछि पोखरा विश्वविद्यालयले दुई वर्षपछि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसैगरी, त्रिविले सन् २००२ बाट यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
विदेशी सम्बन्धनमा २४ कलेजमा बिबिए
स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा अहिले राजधानीमा मात्र दर्जनौँ क्याम्पसले बिबिए कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा २४ क्याम्पसले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर बिबिए कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । नेपाली विश्वविद्यालयका बिबिए सेमेस्टर प्रणालीमा चारवर्षे कार्यक्रम छन् । तर, कतिपय विदेशी विश्वविद्यालयका बिबिए कतै चारवर्षे र कतै तीनवर्षे छन् ।
वित्तीय संस्थामा राम्रो अवसर
बिबिए जनशक्तिलाई देश तथा विदेशका वित्तीय संस्थामा रोजगारीको अवसर छ । व्यवस्थापन शिक्षा लिएका जनशक्ति आवश्यक हुने संस्थाहरूमा बिबिएले अवसर पाउने गरेका छन् । बैंक, वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा पर्यटन कम्पनीजस्ता व्यावसायिक कर्पोरेट संस्था बढ्दै गएकाले पनि बिबिए उत्तीर्ण जनशक्तिलाई अवसर छन् । त्यसैगरी, कर्पोरेट हाउस, उद्योग, एनजिओ÷आइएनजिओ, सेवा उद्योगजस्ता क्षेत्रमा बिबिएले रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् ।
बिबिए अध्ययनका लागि संस्थाअनुसार शुल्क निर्धारण गरेको पाइन्छ । विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा पनि शुल्क फरक छ । शंकरदेवमा करिब चार लाख शुल्क लाग्छ । त्रिविकै सरस्वती क्याम्पसमा तीन लाखको हारहारीमा शुल्क छ । निजी शैक्षिक संस्थामा शुल्क फरक छ । त्रिविको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका सम्बन्धनप्राप्त संस्थाको शुल्क तुलनात्मक रूपमा महँगो छ । कतिपय कलेजले बिबिएका लागि आठ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् ।
प्रा.डा. भोजराज अर्याल
बिबिए सीमित विद्यार्थी भर्ना गरेर सञ्चालन गरिने कोर्स हो । सीमित विद्यार्थी हुँदा ध्यानपूर्वक पढ्ने वातावरण हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा बिबिएसभन्दा बिबिए महँगो हुन्छ । सेमेस्टर प्रणाली हुन्छ । पढाउने शैली पनि फरक हुन्छ । इन्टर्नसिपको व्यवस्था हुन्छ । जे पढ्छन् त्यही विषय प्रयोगात्मक ज्ञान र सीपसमेत पाउँछन् । शिक्षकले ध्यानपूर्वक पढाउँछन्, समयमै पढाइ सकिन्छ । समयमै भर्ना, परीक्षा र व्यावहारिक ज्ञानका साथै समयमै नतिजा आउँछ । रिपोर्ट लेखनको क्षमता हुन्छ । फिल्डमा जानुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसारको ज्ञान प्राप्त गर्छन् । विद्यार्थीमा रिसर्चको गुण आउँछ । केसका आधारमा पनि पढिन्छ । विद्यार्थीमा विश्लेषण गर्ने गुण हुन्छ । यो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ । बिबिएका लागि सीमित कोटा निर्धारण छ । यसले गर्दा शिक्षक र विद्यार्थीबीच छलफल तथा सहभागितामूलक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुन्छ ।
#बिबिए # स्नातक विशेष
एमबिबिएस अध्ययनका लागि जुम्लामा पूर्वाधार तयार
नेसनल मेडिकल कलेजको धम्की ! होस्टलमा नबस्नेलाई पढ्नै नदिने
हत्याको आरोपमा १४ वर्ष जेल बसेका ४० वर्षीय विद्यार्थीले पूरा गरे एमबिबिएस पढाइ